Knowledge Sharing and Advertising –2– NETPRO GPS Solutions
Knowledge Sharing and Advertising-2
Post တခုလောက်စရေးလိုက်တာ….Customer တယောက်ဖုန်းဆက်လာကော… နောက် post တခုအတွက် ကုန်ကြမ်းလေး ရသွားတယ် 😁
လယ်ထွန်စက်တွေမှာ ထွန်ယက်ပီးသား လယ်ကွက်တွေကို GPS နဲ့ တိုင်းတာတဲ့အခါ တိကျမှုရှိနိုင်လားသိချင်ပါတယ်တဲ့.??? အရမ်းကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးပါပဲ…
👉ပိုင်ရှင်တွေအတွက်က စက်တွေကို အငှါးနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ တိကျမှုရှိမှသူတို့အတွက်အဆင်ပြေမှာပါ….သုံးရကျိုးလဲနပ်မှာပေါ့…
👉Customer အချို့ဆီကလည်း ကြားရသေးတယ်…. ကိုယ်လုပ်ကွက်ပီးသွားတာ ကို မပီးသေးဘူး ပြောပီး အချိန်ပိုတွေ ဆွဲနေလားလဲ သိချင်ပါတယ်တဲ့ 😂😂 သိနိုင်ပါတယ်….
ကမ္ဘာပေါ်မှာ GPS Satellite လွတ်တင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်….အဲ့ဒီထဲမှာ အသုံးအများဆုံး ကတော့…
၁. US Satellite – GPS လို့ပဲခေါ်ပါတယ်….
၂. Europe Satellite – Galileo လို့ ခေါ်ပါတယ်….
၃. Russia Satellite- GLONASS လို့ခေါ်ပါတယ်..
၄. China Satellite – Beidou လို့ခေါ်ပါတယ်..
၅. India Satellite – IRNSS လို့ခေါ်ပါတယ်…
၆. Japan Satellite – QZSS လို့ခေါ်ပါတယ်.. etc.
(wiki မှာ လေ့လာပါ အသေးစိတ်ကတော့) https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System)
​ပြောချင်တာကတော့ GPS Position တိကျမှုရှိတဲ့အကြောင်းပါ…
Satellite များများမိလေ Position ပိုတိကျလေပါပဲ…… Satellite တွေက Transmitter တွေပါ… Receiver တွေနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းယူ အသုံးပြုရတာပါ… ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Smart ဖုန်းတွေကို GPS Receiver အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရနေပါပီ… ဖုန်းထဲမှာ software ထည့်ပီး ဘယ်ရောက်နေလဲ ခြေရာခံလို့ရပါတယ် 😀😀
အပေါ်ကို ပြန်ဆက်ရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ NETPRO က အသုံးပြုတဲ့ GPS Receiver တွေက Lithuania နဲ့ Russia ဘက်ကမှာယူတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်… တိကျမှုကတော့2meter က နေ3meter အတွင်းရှိပါတယ်…. Satellite ကတော့ အနည်းဆုံး ၁၀ လုံး နဲ့ ၁၅ လုံးကြား ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်…
ကဲ တိကျမှုကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ position ဖမ်းပီး ဒုန်းကျည်နဲ့ ပစ်ရင်တောင် ကွက်တိပါပဲ ……….🤣🤣🤣🤣🤣
Knowledge Sharing and Advertising – 1 knowledgesharingandsdvertisingp1 | NETPRO GPS Solutions netpro_gps_solutions_general_post လုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားကြီးများအတွက်...